Filtrer les éléments par date : lundi, 06 mars 2017
lundi, 06 mars 2017 23:06
Mandrosoa Ivato : Fatin-jazarano hita tao an-tanim-bary
Zazalahy efa hary tongotra aman-tanana no nesorin-dreniny, novonoina dia nariana tao an-tanimbary notsindriana vato. Latsa-dranomaso ireo izay nahita ary avy hatrany dia nitady ilay reny nahavanon-doza.
Soa fa nalaky tonga ny Zandary avy ao amin’ny “Poste Avancé” Mandrosoa nitondra azy any amin’ny Borigady Talatamaty, Distrika Ambohidratrimo.
Avy any Manakara ilay vehivavy, araka ny filazan’ireo mpiara-monina aminy. Adin’ny mpivady no nitarika azy hanala zaza.
Nalain’ny Zandary tany an-toeram-piasanany ilay raim-pianakaviana mba hatao famotorana ny anton’izao raharaha izao.
lundi, 06 mars 2017 22:34
Fanafihana mitam-basy : Zandary roa amperinasa tratra
Olona telolahy no voasambotry ny Zandary avy any amin’ny «Groupement Analanjirofo » tamin’ny 22 febroary 2017 teo, noho ny fanaovana asa ratsy.
Jiolahy efa tena ikoizana amin’ny raharaha toa ity ny iray amin’izy ireo ; Zandary roalahy hafa kosa, miasa ao amin’ny “Groupement Analanjirofo” no niara-mitsikombakomba taminy ka nahatratrarana basy “kalachnikov” iray, izay very tamin’ny 20 febroary 2017 rehefa avy nentina namita iraka ny omalin’io. Ny 22 febroary 2017 no hita tao an-tranon’ny iray amin’ireto Zandary ireto ity basy ity.
Nisy bala fampiasa amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika maro mbola tra-tehaka tao an-tranon’ity Zandary ity nandritra ny fisavana natao.
Nahatratrarana vola sandoka iray alina miisa 11 mitentina 110.000 Ariary sy tapaka vody basy ihany koa tamin’ireto Zandary ireto, nandritra izany fisavana natao tao an-tranony. Tsy nahitana irony milina fanontana vola irony kosa anefa tao aminy.
lundi, 06 mars 2017 22:31
Mandritsara : Tafakatra 1000 Ariary ny kapoakam-bary
Niakatra ny vidim-bary eto Mandritsara, 1000 Ar ny kapoaka omaly alahady ary 900, 800 ary 700 Ar ny kapoaka androany alatsinainy.
lundi, 06 mars 2017 22:18
Tranombokim-pirenena: Ceinture verte
Toy ny isan-taona dia mikarakara varotra fampirantiana voninkazo ny CEINTURE VERTE. Koa amin’izao akatoky ny andron’ny vehivavy izao dia mikarakara varotra sy fampirantiana izy ireo izay hotontosaina eny amin’ny tranombokim-pirenena ny 08 marsa ho avy izao.
Hiavaka kely ity varotra fampirantiana ity satria dia ahazo tombony izay tonga ao, noho ny fisian’ny fanofanana mamboly voninkazo izay maimaim-poana.
lundi, 06 mars 2017 22:12
Carlton: Salon des Etudes Internationale
Ny MADA JEUNE dia mikarakara Salon des Etudes Internationale, izay tanterahana ao amin’ny Carlton Anosy ny 08 sy 09 martsa ho avy izao.
Hisy ny conférence amin’izany fotoana izany, izay iresahana manokana ny eo amin’ny sehatry ny fianarana eto Madagasikara izay iraisana amin’ny avy any ivelany.
lundi, 06 mars 2017 22:03
SAMBAVA : Fivoriana maika noho ny rivodoza ENAWO
Nivory tato amin'ny efitra malalaky ny Faritra SAVA ireo tompon'andraiki-panjakana maro ka mandefa hafatra maika ho an'ny mponina SAVA:
1-Ny JIRAMA dia efa vonona ny tahirin-drano madio, ary na dia eo aza ny fitsitsiana dia alefa 24/24 ny jiro mba hahafahan'ny rehetra manaraka vaovao fa rehefa tafiditra tanteraka kosa ny rivodoza ENAWO dia tsy maintsy tapahana ny jiro mba hisorohana ny loza.
2- Mikatona manomboka rahampitso talata 07marsa ny sekoly rehetra ato aminy Faritra SAVA mandra-pandrenesana fa lasa tanteraka ny rivodoza. Ary sokafana ho an'ny rehetra mba ho trano fialofana ny sekoly rehetra.
3- Didiana ny sefo CSB rehetra mba tsy hiala ao amin'ny hopitaly hiadidiany ary efa vonona ihany koa ireo vonjy aina raha sanatria ka misy ny loza. Ny Ambulance Sambava Tel 032 07 100 00
4-Hahemotra ho amin'ny fotoana manaraka ny fankalazana rezionaly 08 marsa saika hatao any Andapa.
lundi, 06 mars 2017 22:02
Ambatondrazaka : Nodimandry ny lefitry ny Distrika
Nindaosin’ny fahafatesana ny alin’ny sabotsy 4 marsa teo amin’ny faha-53 taonany Randriamaniry Jean Jacques rehefa nolazoin’ny aretina tao anatin’ny telo herinandro teo.
Notsaboina tao amin’ny Hopitaly miaramila Soavinandriana-Antananarivo izy, ary tao no nodimandry.
Ny alahady alina no tonga taty Ambatondrazaka ny razana.
Mpanakanto Randriamaniry Jean Jacques, ary Zokibe Jacques no ahafantaran’ny maro azy eo amin’ny sehatry ny kanto, mpitendry gitara tao amin’ny tarika Novah Dakoto sy Seth Mahavangivangy.
Namela mananontena sy kamboty efatra mianadahy i Zokibe Jacques izao nodimandry izao.
lundi, 06 mars 2017 15:14
Morondava : Mirongatra indray ny aretina ambalavelona
Nahitana trangan’aretina na sekoly miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe. Nanentana ny ray aman-dreny ny lehiben’ny Cisco Morondava mba hitazona any an-trano ireo zaza tratr’ity aretina ity.
Vavaka aloha hatreto no tanterahina hanalefahana ity aretina ity.
lundi, 06 mars 2017 15:05
Sambava : Vonona hiatrika ny rivodoza ENAWO
Andian-drahona matevina no mandrakotra an’i Sambava amin’izao ary hita fa niakatra sahady ny ranomasina no sady harahina tafiotra mafy izany.
lundi, 06 mars 2017 13:40
De forte pluie s’abat sur Toamasina en ce moment.